Antony amin'ny fividianana sehatra automatisation marketing | Martech Zone
Antony amin'ny fividianana sehatra automatisation marketing
Alakamisy, Desambra 29, 2016 Douglas Karr
Misy maro rafitra automatisation marketing any ivelany… ary maro amin'izy ireo no mamaritra ny tenany ho automation marketing miaraka amina ambaratongam-pahalalana tena misy manohana azy. Na izany aza, mijery ny orinasa maro isika lesoka goavambe na mandany vola be loatra, fotoana be loatra na mividy vahaolana diso daholo.
Manokana ny teknolojia marketing, dia mametraka fanontaniana vitsivitsy foana amin'ny fizotry ny fifidianan'ny mpivarotra:
Inona no mety hitanao fa tsy araraoty izany? Mitarika ve ny fikolokoloana? Miorina amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny varotra ny isa? Manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny na hitazomana ireo mpanjifany amin'izao fotoana izao? Sa mampihena fotsiny ny enta-mavesatry ny ekipanao sy ny mandeha ho azy ny sasany amin'ireo fizotran'ny boky izay ampiasanao amin'izao fotoana izao.
Inona ny fandaharam-potoana mila mampihatra sy mahita valiny ve ianao? Ahoana ny faharetanao mila miarina sy mihazakazaka mahita ny fiverenan'ny fampiasam-bolanao? Inona no teboka tsy azo lavina hanambarana fahombiazana?
Inona no loharano mila mampihatra sy mitantana ny rafitra ve ianao? Goavana ity! Mila manao fikarohana persona ve ianao? Ianao ve mila mampivelatra ny dian'ny mpanjifa hatrany am-boalohany? Mila mamolavola ny maodelin'ny mailaka anao koa ve ianao? Hahomby ve ny fampidirina amina vokatra na mila manana fampandrosoana fanampiny ianao hahazoana ny vokatra ilainao?
Data inona mila manomboka ve ianao ary amin'ny fomba ahoana no handehananao sy hanavaozanao ny angon-drakitry ny dia ataon'ny mpanjifa rehefa nohavaozina ny fitondran-tena, ny fividianana ary ny angona hafa? Ny rafitra diso ary ho hitanao fa maina ny loharanonao, manandrana manova sy mandefa data eo anelanelan'ny rafitra ianao.
Fampiasam-bola inona afaka manamboatra? Tsy ny fahazoan-dàlana fotsiny ny sehatra, fa ny vidin'ny fandefasana hafatra, ny serivisy ary ny fanampiana, ny fampandrosoana ny atiny, ny vidin'ny fampidirana ary ny fampandrosoana, ary koa ny vidin'ny fampiharana, fikojakojana, fanandramana ary fanatsarana.
Toy ny fitsipika ankamantatra, izahay dia mangataka amin'ny mpanjifanay mba hanao sarintany ny dian'ny mpanjifany:
fahazoana - Ho an'ny vokatra tsirairay sy ny loharano fitarihana tsirairay, inona ny dia alehan'ny vinavinan'ny lasa mpanjifa? Ampidiro ireo loharanom-pahalalana nentim-paharazana, loharanom-pahalalana referral ary loharanon-tserasera. Ho hitanao ny fizotrany iza no tena mahomby indrindra, mitondra ny karamanao betsaka indrindra ary mandany vola kely indrindra. Azonao atao ny mampiasa automatique marketing mba hampitomboana ny volan'ny tsara indrindra na hanamboarana ny fizotrany amin'ireo dia tsy dia mahomby nefa mahasoa.
fihazonana - Ho an'ny vokatra tsirairay, inona ny dia ataon'ny mpanjifa mba hijanonany na hiverenany amin'ny maha-mpanjifa azy? Ny rafitra automatisation marketing dia mety ho fitaovana mahatalanjona hampitomboana ny fihazonana. Azonao atao ny mampiasa fampielezan-kevitra an-tsambo, fanentanana fampiofanana, fanentanana miorina amin'ny fampiasana, ary maro hafa. Aza atao ambanin-javatra ny fanampiana ananan'ireo sehatra ireo anao fitandremana mpanjifa mahafinaritra.
Upsell - Ahoana no hampitomboanao ny saran'ny mpanjifa amin'ny marikao? Misy vokatra na fotoana fanampiny ve? Ho gaga ianao amin'ny mpanjifa maro anao izay mandany vola amin'ireo mpifaninana aminy satria tsy tsapany akory izay atolotrao!
Isaky ny dia tsirairay, dia sariho izao:
Mpiasa sy ny vidiny - Ohatrinona ny vidin'ny mpiasao varotra sy ny varotrao hahazoana ny firaka tsirairay sy ny mpanjifa tsirairay mahay?
Rafitra sy vidiny - Inona avy ireo rafitra angonina angon-drakitra eny an-dàlana?
Fahafahana sy fidiram-bola - Inona ny fitomboana kendrena isaky ny dia ary ohatrinona ny karama fanampiny azo azo amin'ny alàlan'ny automatisation sy ny fanatsarana ireo dia ireo? Azonao atao aza ny manombatombana ireo - 1%, 5%, 10%, snsetera fotsiny mba haka sary an-tsaina ny fahafaha-miditra miditra. Afaka manome anao ny fanamarinana ny tetibola hanaovana ny fampiharana izany.
Azonao atao ny mikaroka orinasa hafa ao amin'ny indostriao ary mijery ny tranga fampiasana avy amin'ireo mpivarotra automatique marketing. Tsarovy anefa, na izany aza, ny sehatry ny automatisation marketing dia tsy mamoaka ireo fampiharana mampidi-doza - fa ny mahagaga ihany! Raiso ny isa miaraka amina masira rehefa miasa ianao hahita ny sehatra mety.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, alohan'ny hividiananao ny lampihazo dia tokony efa nametraka ny paikadinao rehetra ianao ary vonona ny hampihatra! Sahala amin'ny fananganana trano… tsy maintsy manana ireo rafitra ianao alohan'ny manapa-kevitra ny fitaovana, ny mpanao trano ary ny entana ianao! Rehefa voalazanao tsara ny paikadinao, azonao atao ny manombatombana ny sehatry ny automatisation marketing mifanohitra amin'io paikady io hamantarana ireo sehatra mety hahombiazanao. Hitanay ny tsy fahombiazana bebe kokoa amin'ireo orinasa izay mividy ny lampihazo ary manandrana manova ny fizotrany mba hametrahana ireo lesoka amin'ny sehatra. Ianao dia maniry ny sehatra izay tsy manelingelina indrindra ary mahazaka indrindra ny loharano, ny fizotranao, ny talentanao, ny fotoana ary ny famerenam-bola manaraka.
Tena mamporisika anao izahay hiala amin'ny fangatahana referansy amin'ny sehatra misy anao ary hiditra amin'ny Internet fotsiny hitady mpanjifa. Toy ny tranga fampiasana, matetika ny referansy dia raisin-tanana sy mpanjifa mahomby indrindra. Te-hahatratra sy hanadihady ny mpanjifa antonony ianao hahitanao hoe inona ny haavon'ny serivisy, ny fanohanana, ny paikady, ny fampidirana ary ny fanavaozana omen'ny sehatra automatique marketing anao. Fantaro fa handre tantara mampihoron-koditra ianao - manana izany ny sehatra automatique marketing. Ampitahao ny loharanom-pahalalanao sy ny tanjonao amin'ny tsirairay amin'ireo fanovozanao hitsarana raha mety haminany ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao izany na tsia.
Manana mpanjifa iray izahay nampiditra sy nametraka sehatra enina niorina tamin'ny quadrant mpandalina fotsiny. Fony ny lampihazo vonona ny handefa tsy nanana tetika, tsy misy atiny ary tsy misy fitaovana handrefesana ny fahombiazan'ny tena fampielezan-kevitra izy ireo! Noheverin'izy ireo tsara fa hanana fanentanana santionany amin'ny sehatra izy ireo hahafahan'izy ireo manavao sy mandefa… tsia. Natomboka toy ny akorandriaka banga ny sehatra.
Ny fifandraisana amin'ny sehatra dia tsy nanana loharanom-pahefana stratejika, ihany koa, ny fanohanan'ny mpanjifa fotsiny amin'ny fampiasana ilay sehatra. Ny orinasa dia tsy maintsy nivoaka ary nanao fikarohana momba ny persona ho an'ny mpanjifany, manakarama mpanolotsaina hanampy amin'ny fampandrosoana ny dian'ny mpanjifa, ary avy eo miasa miaraka amin'ireo mpanolo-tsaina mba hitazomana sy hanatsarana ny fampielezan-kevitra. Gaga izy ireo fa ny vidiny hampiroboroboana sy hanatanterahana ny fanentanana voalohany dia nanaloka ny fampiharana teknolojia iray manontolo.
Tags: fahazoanaautomation marketingfihazonanaupsellfifidianan'ny mpivarotra
Ahoana ny fomba fanoratana lohateny ahazoana ny saina izay hanindriana ny olona
Dec 30, 2016 amin'ny 9: 39 AM
Misaotra anao noho ireo torohevitra ireo, tena zava-dehibe daholo izy rehetra. Ny automatisation marketing dia mety hitondra valiny tena tsara, saingy tokony ho fantatry ny mpanjifa fa fitaovana io ary tsy handeha raha tsy misy tetika sy atiny. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fisafidianana ny sehatra manome fanohanana sarotra amin'ny fametrahana fampielezan-kevitra. Te hanome sosokevitra an'i Synerise aho, izay sehatra tahaka izany. Ny mpanjifa dia tsy mahazo fidirana amin'ny endri-javatra rehetra, fa koa fampiofanana, fanampiana ary torohevitra.